ट्रकसँग कार ठोक्किदा डा. किदवाईको ज्यान गयो « Tulsipur Khabar
ट्रकसँग कार ठोक्किदा डा. किदवाईको ज्यान गयो
बाँके, ६ असार ।
बाँकेको राप्ती सोनारिको गाभरमा गाडी दुर्घटना हुँदा एकजनाको ज्यान गएको छ । दुर्घटनामा नेपालगञ्ज मेडिकल कलेज शिक्षण अस्पतालका निर्देशक डा. एम किदवाईका छोरा डा. अमन किदवाइको दुर्घटनामा ज्यान गएको हो । सोमबार बेलुका दाङबाट नेपालगञ्जका लागि छुटेको बा ९ च ५९४७ नम्बरको कार ना ५ ख ९१८१ नम्बरको ट्रकसँग ठोक्किएर दुर्घटना भएको हो ।
दुर्घटनामा अमनका भाइ डा. असिम किदवाई र मेडिकल कलेजमै कार्यरत डा. विमर्श अधिकारी घाइते भएका छन् । ट्रक र कार एकअर्कालाई ओभरटेक गर्ने क्रममा दुर्घटना भएको प्रहरीले जनाएको छ। मेकिडल कलेजमा कार्यरत अमनको घटनास्थलमै मृत्यु भएको ईलाका प्रहरी कार्यालय कोहलपुरका प्रहरी निरीक्षक नवराज पोखरेलले जानकारी दिनु भएको छ।
उहाँले डा. असिम र अधिकारी गम्भीर घाइते भएकोले नेपालगन्ज मेडिकल कलेजमा उपचार भइरहेको जानकारी दिनुभयो। दुर्घटनामा परेको कार क्षतिग्रस्त भएको प्रहरीले जनाएको छ। ट्रक चालक र ट्रकलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ।